सु’न्दा मात्रै पनि अ’च्चम : मृ’त श्रीमतीको ला’शसँग ६ घण्टा ल’गातार स’म्बन्ध ! – AB Sansar
सु’न्दा मात्रै पनि अ’च्चम : मृ’त श्रीमतीको ला’शसँग ६ घण्टा ल’गातार स’म्बन्ध !
November 29, 2020 santoshLeaveaComment on सु’न्दा मात्रै पनि अ’च्चम : मृ’त श्रीमतीको ला’शसँग ६ घण्टा ल’गातार स’म्बन्ध !
काठमाडौं । ‘लाशसँग पनि भौतिक सुःख खोज्ने श्रीमान’ सुन्दा मात्रै पनि ‘अच्चम लाग्न सक्छ । तर अच्चम नमान्नुहोस् किनभने यो पृथ्वीमा यस्तै खालको घ’टना भएको छ । मृत्युपछि सम्बन्ध राखेको खुलासापछि विश्वभर यो स’माचार रा’तारात भाइरल भएर फैलिएको छ ।
घटना अनु’सार एक पतिले आफ्नी पत्नी’को मृ’त्युपछि सम्बन्ध राखेका हुन् । इजिप्टमा, एक पतिले आफ्नी पत्नीको ला’शसँग छ घण्टा सम्बन्ध राखेको बताइएको छ । अचम्मको कुरा त के छ भने यसलाई त्यहाँको सरका’रले कानुनी मान्यता पनि दिने भएको छ । कानुनमा यसलाई ‘फेयरवेल’ वा ‘विदाई’ सम्बन्ध नाम दिइएको छ ।
एक पतिले आफ्नी पत्नीसँ’ग यसरी स’म्बन्ध राखेको घ’टना बाहिर आएको थियो । जब मौलवी जमज्मी अब्दुल बारीले एक फतवा जारी गरेर भने कि मृत्यु पछि पनि विवाह मान्य रहन्छ । तसर्थ पति–पत्नीले मृत”कसँग सम्बन्ध राख्न सक्दछन् ।
मिश्री सरकारले तयार पारेको यो कानून बमोजिम महिलालाई पनि आफ्नो’ मृ’त पतिहरु संग सम्बन्ध राख्न अधिकार छ । इजिप्ट’मा मानिसहरु यो कानू’नलाई लिएर खुःशी छैनन् । इजिप्टको म’हिला रा’ष्ट्रिय परिषदले यी परिवर्तनहरूका बि’रूद्ध अभियान चलाइरहेको छ ।
इजिप्टको महिला आयोगका अध्यक्षले संसदलाई यो का’नून नबनाउन आग्रह गरेका छन् । त्यहाँ भनिएको छ मृ’त्यु’पछिको स’म्बन्ध भनेको पु’रुषका लागि मात्र हो । महिला’का लागि यो स’म्भव छैन । किनकी मृ’त्यु’पछि श्री’मान सक्रिय रह’दैनन् । तर महिलाको मृ’त्यु’पछि’पनि सम्भव छ । यो वि’भेद’पूर्ण कानून हो । य’सलाई हटाउनुपर्छ ।
January 28, 2021 January 28, 2021 Ab-संसार
एउटा सामान्य कुरालाई लिएर डाक्टर दम्पत्तिले गरे देहत्याग